Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle kufu - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle kufu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCosta Spain
Igumbi lokulala eli-2 langoku lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeholide yehlobo ekhululekileyo eCambrils. Ibekwe ngokufanelekileyo elunxwemeni nakwiziko lokuphumla.
Ukuhamba nje yimizuzu emi-5 kwisitrato esizolileyo ukuya elunxwemeni, esilungele ukuqubha nabantwana, kunye nevenkile yokutyela ekufutshane kunye nevenkile enkulu.
Imizuzu eli-15 uhamba kwisitrato esizolileyo ukuya embindini wedolophu yakudala kunye nezibuko laseCambrils, apho kukho iindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile.
Indlu yenza ukulungiswa okusemgangathweni ophezulu ngemibala eqaqambileyo, izixhobo ezitsha zendlu kunye nefenitshala yafakwa.
Igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokulala lesibini elineebhedi ezimbini ezingatshatanga.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zale mihla zokupheka.
Kwigumbi lokuhlala kukho isofa yesofa, iTV yeplasma, itafile yokutyela kunye nezitulo ezi-6. Kukho nokufikelela kwi-terrace eneembono zegadi kunye nedama, kunye nefenitshala yeplastiki.
Umoya wokuhlala kwiflethi ukhululekile kakhulu ukuphumla.
I-Cambrils, eyayisakuba lizibuko elidala lokuloba, kwaye ngoku iyindawo entle yokuchithela iiholide ene-10 km yeelwandle ezilungiswe kakuhle, ibekwe "kunxweme lwegolide" lweSpanishi yaseCosta Daurada. Iinzuzo eziphambili zale ndawo yokuphumla ulwandle olucocekileyo, iilwandle ezintle kunye neholide yokuphumla, ilungele iintsapho ezihlala kwiiholide.
ICambrils yaziwa njengenye yezona ndawo zibalulekileyo zegastronomic kwiCosta Dorada. Isizathu salokhu sisithethe esidala seendawo zokutya ezahlukeneyo, ukusuka kwi-zucchini yokuloba eyavela apha ekuqaleni kwekhulu lama-20, ukuya kwiindawo zokutyela zanamhlanje eziqatshelwe yi-gourmets yaseSpain nakwihlabathi jikelele. Imvelaphi yokutya kwendabuko yaseCambrils, eyenza ukuba ibe yinkunzi ye-gastronomy yonxweme lonke, ilele kwindawo ebizwa ngokuba "kwiindawo zokuphumla ezidadayo" ezibekwe ngqo kwiinqanawa zokuloba. Bapheka ukutya okutsha, okusanda kubanjiswa iintlanzi kunye nokutya kwaselwandle. KwiiCambrils uya kufumana izibonelelo zayo yonke incasa. Ukusuka kwiindawo zokutyela ezidumileyo ezineenkwenkwezi zaseMichelin ukuya kwiithaveni zabalobi.
Isici esahlukileyo seCambrils ziilwandle zayo kunye nolwandle olucacileyo. Iikhilomitha ezili-9 zeelwandle ezintle zesanti yegolide ezibonelela ngomgangatho ongachanekanga kunye nentuthuzelo, nalapho iBlue Flag yomgangatho iphuhla.
Ezona lwandle zidumileyo yiCap de Sant Pere, apho kukho isikolo sokuhamba ngeenqanawa, kunye neHorta Santa Maria, kufutshane nalapho kukho iklabhu yeyacht. I-Llosa ithathwa njengeyona nto inomtsalane kwiintsapho ezinabantwana, kwaye iCavet inabantu abambalwa nakwixesha lexesha eliphakamileyo - umgama ukusuka kumbindi wesixeko. Iilwandle zaseCambrils zinesango elide elithambileyo lokungena elwandle, ngoko ke zilungele iintsapho ezinabantwana abancinci.
Ilifa lenkcubeko elibanzi eliya kukuvumela ukuba wonwabe yonke imbali yakho. Iimyuziyam, iindawo ze-archaeological, iindwendwe, ii-cellars zewayini, imikhosi kunye nezithethe ezahlukeneyo ... Kwiofisi yethu siya kukunika ulwazi oluyidingayo ukuze ucwangcise ukuhlala kwakho eCambrils.
Umbuki zindwendwe ngu- Costa Spain
Bienvenido a la costa de la soleada España!
Ofrezco viviendas de alquiler para sus vacaciones de verano: villas, casas y apartamentos ubicados a orillas del mar Mediterráneo.
Con nosotros puede relajarse completamente y disfrutar de su estancia en un alojamiento confortable con hermosas vistas de la naturaleza.
Estaré encantado de responder a todas sus dudas y convertirme en su guía personalizado para que puedan disfrutar al maximo en el paraíso del verano.
Ofrezco viviendas de alquiler para sus vacaciones de verano: villas, casas y apartamentos ubicados a orillas del mar Mediterráneo…
Indawo yokuhlala ibandakanya: amashiti ebhedi, itawuli yokuhlamba umntu ngamnye, iKiti yekhitshi e-1 (ibandakanya: isipontshi, ingxowa yenkunkuma, iibhotile ezincinci zolwelo lokuhlamba izitya, isicoci kunye nesithambisa), i-intanethi (WiFi)
INDAWO YOKUHLALA AYIBAndakanyi: ibhafu, amalaphu ekhitshini kunye nerhafu yabakhenkethi
Indawo yokulala kufuneka ishiywe ikwimeko efanayo naleyo ibinikezelwe kuyo.
!!! Iqula sele livuliwe !!!
Indawo yokuhlala ibandakanya: amashiti ebhedi, itawuli yokuhlamba umntu ngamnye, iKiti yekhitshi e-1 (ibandakanya: isipontshi, ingxowa yenkunkuma, iibhotile ezincinci zolwelo lokuh…
Inombolo yomthetho: HUTT-044761
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cambrils